Tsy fandriampahalemana hafa koa… | NewsMada
Tsy fandriampahalemana hafa koa…
Tsy azo lavina, iaraha-mahita izao: misy ny ezaky ny fitondram-panjakana hamerina amin’ny laoniny ny fandriampahalemana. Na an-tanàn-dehibe io, na ambanivohitra, na amin’ny lalam-pirenena… Na izany aza, be hatrany ny mbola miandry no ho ny kely natomboka. Mbola tsy mandry ny tany. Nahoana?
Na ahoana na ahoana aloha, misy ihany ny asan-jiolahy etsy sy eroa. Ao aza ny tena fanafihan-dahalo. Tsy mbola mandry fahalemana ny tany. Eo ihany izay, fa tena mandry eritreritra tanteraka ve ny vahoaka ifotony? Ny amisavisana ny ratsy amin’izao, hiavian’ny soa… hahatsara zavatra.
Tsy inona izay ahiahy tsy ihavanana izay fa ny tahotra valifaty. Tsy hoe fongana ka tsy misy intsony tsinona ny olon-dratsy ka hoe tapitra voasambotra sy voatsara ary voasazy avokoa, fa tsy manao ny asa ratsiny fotsiny aloha izy ireo amin’izao: mandra-pahoviana? Tsy irina akory ny hiverenany, sanatria.
Tsy kely lalana ny ratsy. Raha tsy misy firy intsony na foana, ohatra, ny fakana an-keriny, mba fantatra sy voasambotra avokoa ve ireo tena atidohaben’ny fanaovana izany izay ela izay? Toy izany koa ny amin’ny fangalarana taolam-paty; ny fanondranana an-tsokosoko sokatra, andramena, volamena…
Efa zava-dehibe ny tahotry ny tsy tan-dalàna sy ny olon-dratsy ny mpitandro filaminana amin’izao: tena manao ny asany, tan-dalàna fa tsy misy ny hoe ambonin’ny lalàna… Toy izany koa ny fitsarana; eny, na ny fanjakana ankapobeny aza. Mba tsy ho am-boalohany ihany ny raharaha. Nahoana?
Mba tsy ho tahotra fitsarana sy fonja intsony fotsiny ny hoe fanarahan-dalàna fa ho fahatsapana sy fiainana anaty ny soatoavina amin’ny maha olombelona: ratsy ny mangalatra, mamono olona, manao kolikoly… Ho an’ny rehetra tokoa ny lalàna, natao handaminana ny fiarahamonina fa tsy inona.
Tsy vitan’izany, mila mazava sy iainana koa fa manana ny hasiny ny fanjakana, manana ny satany sy ny fiandrianany ny firenena: tompony mahazaka manana amin’ny fitantanana sy ny harena ao aminy tokoa ny vahoaka… tompom-pahefana. Mba misitraka izany tena hampandry fahalemana azy izany ve?